हवाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सीसीएमसीको सिफारिस, कहिलेदेखि हुन्छ बन्द ? - jagritikhabar.com
हवाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सीसीएमसीको सिफारिस, कहिलेदेखि हुन्छ बन्द ?
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले कोभिड–१९ भाइरसको नयाँ भेरियन्ट फेला परेको मुलुकमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सीसीएमसीको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
त्यस्तै, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीको समेत सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा अधिकांशले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कामको आलोचना गर्दै तत्काल उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरूले जनताले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न नसकेको र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा घटाएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको आलोचना गरेका थिए ।